Zhejiang Lianzhan Electronics Co., Ltd. Yasekwa ngonyaka ka-2008, ngobungcali ezikhethekileyo mveliso kunye nokuthumela 1/4 "Iifowuni zeeJacks, IiJacks zomsindo, XLR Izihlanganisi, I-XLR yomsindo weCombo Jack, Thetha kwisiXhumi, Isinxibelelanisi sePowercon kwaye URCA uJack njl njl, ubukhulu becala bakhonza kumacandelo abaxube, Isandi seConsole, iiGuitar Amplifiers, iVidiyo yeVidiyo kunye nokuKhanya kweSiteji okunxulumene noko.
Ii-Pls zifumana ulwazi lwethu olushushu lweemveliso njengasezantsi: ( I-XLR Chassis yePhaneli yeNtaba yeZixhumi, Thetha kwiiNxibelelwano kwaye I-6.35mm yoLungiso lweJack )
1) Lianzhan XLR Isisu semoto IPhaneli yeNtaba yeSocket Connectors zenziwe ngeplastikhi ekumgangatho ophezulu kunye nezinto zentsimbi, ine-conduction elungileyo kunye nokusebenza okuzinzileyo. 3-iPiniIzihlanganisi zeXLR Chassis zezona ndlela zixhaphakileyo okwangoku, kwaye ngumgangatho womzi mveliso weempawu zomsindo ezilungeleleneyo. 5-iPiniXLR Isinxibelelanisi, ihlala isetyenziselwa i-DC Power kwizixhobo zeAudio.
2) Lianzhan Ukuthetha ngokuVakalayo kwisiQhagamshelo iyilelwe ngenkqubo yokutshixa enokuthi yenzelwe ukudibanisa okanye ukujija kohlobo lokudibanisa. Thetha kwiiNxibelelwano zenziwe ngocwangciso ezimbini, ezine kunye nesibhozo sepali. KwayeThetha kwiiNxibelelwano ziyafana ne Isinxibelelanisi sePowerCon.
3) Lianzhan Umsindo 6.35mm (1⁄4 intshi) Ifowuni yeJack ziqhelekile kwizixhobo zasekhaya nezobuchwephesha. Umnxeba weNtloko uJack ine-6.35mm, i-3.5mm kunye ne-2.5mm.
Sinegunya lokulawula ukusuka kwimpahla eluhlaza ukuya kwimveliso yokugqibela ukuqinisekisa umgangatho ophezulu. Senza 100% ulawulo lomgangatho kuyo nayiphi na imveliso; 100% ukoneliseka kwabathengi yinjongo yethu. Senza ukuhanjiswa okukhawulezayo kwaye singaze sikubambezele ukuthunyelwa kweeodolo ekuvunyelwene ngazo. Ewe zonke izinto zethu ziyahambelana nomgangatho weROHS. Ifilosofi yethu yeshishini: "Umgangatho wokuqala! Abathengi kuqala! Ityala kuqala!"
Ngaphezulu kwako konke, siyenye yeenwele ezingwevu kule ndawo, ke i-OEM kunye ne-ODM zamkelekile apha!
Senza iinzame ezinkulu zokufezekisa imeko yokuphumelela kwaye siyakwamkela ngokunyanisekileyo ukuba usijoyine. Nawuphi na umbuzo, pls zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nge-imeyile ngokuthe ngqo:lianwoo@cnlianzhan.com
Silwela ukugqwesa kunxibelelwano lwemihla ngemihla!
Iqela lehlabathi le-LIANZHAN liqela labantu abancinci abaqeqeshiweyo (abantu abaphakathi kweminyaka engama-30 ukuya kwengama-45 ubudala) abaneendawo zabo zobungcali kunye namandla.
Iqela lethu linabantu abaneemvelaphi ezahlukeneyo, kunye nobuntu. Olu dibaniso lwenza iqela elomeleleyo eliya kuhlala lisebenzisana ukufumana iindlela zokuqokelela amandla omnye komnye ukuze kuzuze umthengi. Into abanayo bonke kwi-55 eqhelekileyo kukuba bonke banomdla kwicandelo lokumamela abakulo ngoku.
UWenshen Lian (Mnu)
(UMsunguli kunye ne-CEO)
Umseki kunye ne-CEO ye-LIANZHAN,. awayeyiqala kumasifundisane wosapho kwi2008. Ngexesha lenkampani iminyaka yokuqala, uMnu Lian ungoyena njineli uphambili kwaye akhokele umgca wemveliso kunye nejelo lokuthengisa. Ukongeza ekusebenzeni kwenkampani kunye nokuseta isicwangciso-qhinga semveliso ngokubanzi, uhlala ebandakanyeka ngokukuko kumasebe amaninzi enkampani awayefudula eziqhuba. UMnu Lian uyinkokeli esebenzayo kwaye unombono owahlukileyo kuphuhliso lwenkampani, nangaphezulu kweminyaka engama-20 yamava ekwenziweni kwevidiyo evakalayo. UMnu Lian ubambe isidanga se-bachelor kwimveliso ye-elektroniki kwiYunivesithi yaseWenzhou.
Ukucoca uZhang (Nksk.)
(ICFO kunye neVP)
UNks Zhang nguSekela Mphathi kunye neGosa eliyiNtloko lezeziMali, ekhokela imisebenzi yenkampani yezemali kunye nophuhliso. Uneminyaka engaphezulu kwe-15 yamava ezemali kunye nokusebenza kwiinkampani zombane nezombane. UNks Zhang waphumelela kwiYunivesithi yaseXiamen ngobuchule kwi-accounting.
ULian Woo (Nks.)
(UMlawuli weNtengiso weHlabathi)
UNks Woo ujongene nentengiso yentengiso yamanye amazwe e-LIANZHAN, onobuntu obomeleleyo, kunye nokukwazi ukwenza isigqibo esikhawulezileyo nesichanekileyo kwiimfuno zabathengi abohlukeneyo; onolwazi lwethiyori yothethathethwano kunye neendlela zokusebenza kunye nokukwazi ukusebenza nazo zonke iindlela zokuthengisa; Ngubani oyiqonda ngcono imithetho yorhwebo, imigaqo yenkqubo yeshishini kunye nolwazi lweemveliso; Ngubani oneminyaka engaphezu kwama-9 yamava kwintengiso yamanye amazwe kunye nophuhliso lwabathengi. UNks Woo ufunda kakuhle ulwimi lwesiNgesi kunye nolwaseJapan kwaye ufumana isidanga se-bachelor kwi-Business English kwiDyunivesithi.
Sheng Guan (Mnu)
(Ubunjineli beMveliso ePhakamileyo)
UMnu Guan yiNjineli yeMveliso ePhakamileyo ye-LIANZHAN, ojongana ikakhulu neemveliso zoyilo kwaye alungelelanise inkqubo yokuvelisa iimveliso ukuqinisekisa imveliso kunye nokhuseleko; Ngubani onesakhono esomeleleyo sokuvavanya uhlobo lwento efumanekayo ukuze kuchongwe iingozi ezinokubakho kwezokhuseleko kwaye alungelelanise iziphene zoyilo; ngubani olungileyo ekulungelelaniseni neqela lophuhliso lwemveliso ukugqibezela izimvo zemveliso. UMnu Guan waqala umsebenzi wakhe wobunjineli ukusukela ngo-2001. Wafumana i-BS kwezobunjineli bombane kwiYunivesithi yaseZhejiang Sci-Tech.
Shigui Wang (Mnu)
(IGosa eliyiNtloko leMveliso)
NjengeGosa eliyiNtloko leMveliso ye-LIANZHAN, Mnu.Wang ukongamela umbutho wemveliso, oquka uLawulo lweMveliso kunye noYilo lweMveliso. Phambi kokujoyina i-LIANZHAN, UMnu Wang uchithe iminyaka eli-15 kwicandelo lokumamela kuyilo kunye neejack zokuyila. UMnu Wang une-BS yoyilo kunye nobunjineli bekhompyuter kwiYunivesithi yaseChongqing.
Xiaohong Li (Nksk.)
UNkosikazi Li nguManejala weMveliso ye-LIANZHAN, ophethe ucwangciso lwemveliso, ulawulo lwemveliso, ulawulo lomgangatho, uhlalutyo lwendlela kunye nomlinganiso womsebenzi. UNksk Lian unolwazi oluhle kakhulu lweSoftware ye-AutoCAD, imizobo yokwakha kwaye akwazi ukusebenza ngokusondeleyo kunye namalungu eqela lethu ukuvelisa imizobo ekumgangatho ophezulu kumzi mveliso weaudio. Uyazi kakuhle imveliso kunye nokusebenza komatshini, kunye nokuthanda ukulawula nokukhuthaza amandla amakhulu emveliso. UNksk Li unamava eminyaka eli-12 ekwenziweni kwevidiyo emanyelwayo.
ILingling Zhao (Nks.)
(IGosa eliyiNtloko laBantu)
NjengeGosa eliyiNtloko laBantu, uNks. Zhao ukhokela iqela laBantu laseLIANZHAN, apho anoxanduva lwetalente yenkampani kunye nenkcubeko. Wongamela ezabasebenzi, imisebenzi yabantu, ukufunyanwa kwetalente kunye nophuhliso, amaziko kunye neenkonzo kwindawo yokusebenza, amava omsebenzi, kunye nokwahluka kunye nokubandakanywa. UNks Zhao uneminyaka eli-10 + yamava ekhokelela kwimisebenzi yabantu kwiinkampani zombane nezombane. UNks Zhao ufumene isidanga sakhe se-Bachelor ngokugxininisa kuLawulo lwaBasebenzi kwiYunivesithi yaseZhejiang.
Ngama-27th I-Okthobha ka-2020, uZhejiang Lianzhan Electronics Co, Ltd. uququzelele umsitho wabasebenzi wokufikelela ngaphandle.
Ngentsasa, bonke abasebenzi bethu bahlula-hlulwa baba zii-convoys ezili-18 basinga e "Huang Tan Cave", indawo entle nenembali.
Umqolomba weHuang Tan ubekwe ezintabeni zeZhongYanDang, ngenxa yezithuthi ezingalunganga, khange zisetyenziswe gwenxa, ilali yonke isagcina ukubonakala kwayo kwasekuqaleni.
Idolophana yaseHuang Tan yakhiwe ngamatye avela kwiintaba ezijikelezileyo, enemilambo ecacileyo edlula kwilali kumacala omabini, kunye neendonga zamatye amade kumantla nakumazantsi esixeko sakudala zifana nezithintelo zendalo, zigada ilali yeHangang , ngokungathi kukho uvakalelo lweepesika zehlabathi.
Emva kokufika kwiHuang Tan Cave, sithathe ikhefu saza satyelela iindawo ezinomtsalane ezikufutshane.
Emva kokutyelela izinto ezinomtsalane ezikufutshane, satya kwifama yasemaphandleni
Siphumle emva kwesidlo sasemini .....
Oku kulandelayo kukwandiswa kwemisebenzi, oku kuthatha inxaxheba ekwandiseni inani labantu abangama-80, ngokulandelelana, elinamaqela ama-4, abafundisi abanqunyelwe kwimizuzu eli-10 iqela ngalinye leqela loyilo lweqela, iflegi yeqela, isilogeni. HAYI.1 IQela eliBlue; NO.2 Iflegi yeQela eliPhumeleleyo; HAYI.3 Iqela lokutsiba; Hayi 4 Iqela le-Elves
Umsebenzi wokuqala: Abantu abathathu abaneentlawulo ezine.
Imigaqo yomdlalo: Iqela ngalinye lithumela amaqela amathathu abadlali, elinye kwiqela labathathu
Indlela yokudlala: Iqela ngalinye labadlali libophele amathole alo kunye nelaphu, ekufuneka libotshelelwe emaqatheni kunye namathole kufutshane nendawo yedolo, bemi ngakuqala, impempe yakhala emva kokuba abathathu beqale ngexesha elinye, iqela ifikelele esiphelweni ngeli xesha lifutshane lokuphumelela.
Umsebenzi wesibini: ibhaluni yokubamba
Iqela ngalinye lithumele amaqela amathathu, iqela ngalinye labantu aba-4 emgceni, ilungu ngalinye leqela ngaphambi nasemva kwebhaluni, ngexesha lebhaluni yomdyarho ayivumelekanga ukuba ilungiswe ngesandla, idrophu kufuneka ibuyele kwindawo yokuqala ukuqala kwakhona.
Umsebenzi wesithathu: "utsalo-wemfazwe".
Iqela ngalinye liya kuthumela iqela labadlali abali-12 ukuba lithathe inxaxheba.
Ngolu lwandiso, ayisiyiyo kuphela ukuba siyakuxabisa ukumanyana kweqela kunye nokudityaniswa kweqela, kodwa sonyusa nomoya wentsebenziswano yeqela, emva komsebenzi oxinzelelekileyo, bonke abasebenzi bakhululekile.